Kordhinta Gaaritaanka Dijital ah ee Mobile-first, World-Cookie Post | Martech Zone
Kordhinta Gaaritaanka Dijital ah ee Mobile-first, World-Cookie World
Khamiis, Juun 25, 2020 Khamiis, Juun 25, 2020 Douglas Karr
Maaddaama dabeecadaha macaamiisha ay sii wadaan inay si aad ah ugu socdaan aaladaha mobilada, suuqleyda sumadaha ayaa si isku mid ah diiradooda ugu weeciyay xeeladaha suuqgeynta moobiilka. Iyo, maadaama macaamiisha ay inta badan adeegsadaan barnaamijyadooda taleefannadooda casriga ah, layaab ma leh in xayeysiinta gudaha ku jirta ay amar ku bixiso qaybta libaax ee xayeysiinta moobiilka. Faafida hore, qarashka xayeysiiska moobilka wuxuu ku socday wadada si loo arko 20 boqolkiiba koror 2020, sida laga soo xigtay eMarketer.
Laakiin iyada oo dad badani adeegsanayaan aalado badan isla markaana siyaabo badan oo kaladuwan u isticmaalaya warbaahinta, waxaa dhibaato loo arkaa suuqleyda inay fahmaan aqoonsiga macaamiil guud ahaan muuqaalkooda dhijitaalka ah. Kukiyada saddexaad ayaa loo adeegsaday inay noqdaan habka koowaad ee lagula macaamilo macaamiisha iyada oo loo marayo wadiiqooyinka bulshada iyo dhijitaalka ah; si kastaba ha noqotee, cookies waxay ku soo rogeen xaddidaadyo badan oo ka imanaya bixiyeyaasha biraawsarka waaweyn sida Google, Apple iyo Mozilla. Google-na waxay ku dhawaaqday inay joojinayso cookies-ka saddexaad ee ku jira Chrome sannadka 2022.
Aqoonsiga Xayeysiinta Mobilada
Maaddaama suuqleyda sumaduhu ay raadinayaan habab kale oo lagu aqoonsado macaamiisha ku jirta jawiga cookie-ka ka dib, suuqleyda ayaa hadda u beddelaya xeeladahooda dijitaalka ah Aqoonsiga xayeysiinta moobiilka (MAIDs) si loogu xiro dabeecadaha macaamiisha qalabka oo dhan. MAIDs waa aqoonsiyo gaar ah oo loo qoondeeyay aalad kasta oo moobil ah iyo ku biirista MAIDs astaamaha muhiimka ah sida da'da, jinsiga, qaybta dakhliga, iwm. Waa sida ay xayeysiiyayaashu si wax ku ool ah ugu adeegi karaan waxyaabaha ku habboon ee ku saabsan aalado badan - qeexitaanka ugu weyn ee suuq geynta omnichannel.
Macluumaadka macaamiisha qad la'aanta ah ee suuqleyda ay ku tiirsan yihiin sida lambarrada taleefannada, cinwaanada, iwm. Lama barbar dhigi karo dhismaha astaanta iyadoo la adeegsanayo xogta dhijitaalka ah oo keliya. Xallinta Aqoonsigu waxay ka caawisaa buuxinta farqigaas waxayna shaqaaleeysaa algorithms adag si loo go'aamiyo bal in calaamadaha muhiimka ah ee aqoonsiga dhammaantood ay ka tirsan yihiin isla shaqsi. Shirkadaha sida khabiirka maareynta aqoonsiga macaamiisha Infutor waxay dhisaan noocyada aqoonsiyada internetka iyo khad la'aanta. Infutor wuxuu isku daraa xogta macaamilka u hogaansanaanta asturnaanta, oo ay weheliso xog laga helo ilo kale oo kala geddisan sida marxaladda nolosha dhinac saddexaad iyo astaanta kooxda koowaad ee xogta CRM, waxayna ku ururinaysaa muuqaal firfircoon oo macaamiil ah.
Soo Bandhigida Wadarta Aqoonsiga Xayeysiiska ee Mobilada
Xalka Aqoonsiga Xayeysiiska ee Mobaylka Xayeysiiska ah waa hab muhiim ah oo lagu caawiyo suuqleyda inay buuxiyaan farqiga aqoonsiga boosta kadib markii ay iswaafajiyaan magacyadooda, AQOONSIYADA xayeysiinta moobiilka ee aan ahayn PII cinwaannada e-mayl. Tani waxay awood u siineysaa suuqleyda inay dhisaan astaamaha aqoonsiga u hoggaansanaanta asturnaanta waxayna hubisaa inay gaarayaan milkiilayaasha qalabka ay doonayaan inay gaaraan.
Waxaa awood ku leh TrueSourceTM Sawirka Aaladda Dijital ah, Infutor's Total Mobile Ad IDs waxaa ka mid ah helitaanka 350 milyan oo qalab dijitaal ah iyo 2 bilyan oo ah MAID / lambarada emaylka oo labalaabmay. Aqoonsigan Xayeysiiska ah ee Moobilka ah iyo emaylka la soo diray (MD5, SHA1, iyo SHA256) ee xog-ururinta waa mid u hoggaansan asturnaanta, loona oggol yahay in la helo. Aqoonsiyayaashan aan la aqoon ayaa ilaaliya macluumaadka shaqsiyadeed ee lagu aqoonsan karo (PII) iyagoo ka caawinaya suuqleyda inay xalliyaan oo ay ku xirmaan aqoonsiyada macaamiisha dijitaalka ah ee ku baahsan meeraha iyo garaafkooda aqoonsiga kooxda koowaad.
Wadarta Aqoonsiga Xayeysiiska ee Mobilada xalku wuxuu siinayaa suuqleyda lakab dheeri ah oo amni iyo helitaan deg deg ah xallinta aqoonsiga deg degga ah Xalku wuxuu bixiyaa cabir kale oo xog ah oo fidinaya gaaritaanka suuqleyda iyada oo loo marayo aqoonsiga dhijitaalka ah iyo xallinta qalabka iskutallaabta iyadoo la ilaalinayo xakameynta qeybta koowaad ee PII. Tani waxay awood u siinaysaa farriinta joogtada ah ee omnichannel iyadoo la hagaajinayo kala-soocidda dhagaystayaasha iyo u-shaqsiyeynta khibrad macmiil macno leh.
Xogta guud ee Aqoonsiga Xayeysiiska Moobaylka si adag ayaa loo nadiifiyaa oo laga helaa codsiyada ku saleysan rukhsadda iyadoo loo marayo ilo badan oo lagu kalsoon yahay, hubinta tayada ugu sareysa ee xogta dhijitaalka ah. Dhibcaha Kalsoonida (1-5) waxay ka faa'iideysaneysaa algorithm lahaansho iyadoo la adeegsanayo arrimo sida soo noqnoqoshada iyo soo noqoshada labada lamaane ee MAID / hash oo si wada jir ah loo wada arkay, marka lagu daro isu dheellitirka iyo ansaxinta kale si ay suuqyadu u ogaadaan suurtagalnimada in labada qof ay firfircoon yihiin.
U Dhigida Xogta MAIDs inay Shaqeyso
Nidaamka isdhaafsiga xogta ee BDEX wuxuu isku daraa xogta ilo badan oo si adag ayuu u nadiifiyaa si loo hubiyo saxnaanta iyo lacagta garaafkeeda aqoonsiga. Sawirka Aqoonsiga BDEX wuxuu ka kooban yahay in ka badan tirilyan calaamadaha xogta wuxuuna awood siiyaa suuqleyda inay aqoonsadaan macaamilka ka dambeeya astaan ​​kasta oo xog ah.
Iyadoo lala kaashanayo Infutor, BDEX oo lagu daray xogta xalka Total MAIDs ee isdhaafsiga xogta. Tani waxay kordhisay mugga xogta aqoonsiga BDEX ee aqoonsiga dhijitaalka ah si ay u siiso magacyada iyo suuqleyda helitaanka ururinta dhammaystiran ee MAID / laba-laabo e-mayl dhaqso leh. Natiijo ahaan, BDEX waxay xoojisay xogta dijitaalka ah ee ay siin karto macaamiisha iyadoo si weyn kor ugu qaadeysa tirada kaararka aqoonsiga moobiilka iyo cinwaanada emaylka ee degmadiisa ku jira.
Adduunyada xogta ee raadineysa beddelaadyo ku-saleysan cookie-ku-saleysan dijitaalka, iskaashiga BDEX-Infutor ayaa si aan caadi ahayn ugu habboon. Xog isweydaarsigayaga waxaa loo dhisay si loo xoojiyo isku xirnaanta aadanaha iyo Xadgudubka Wadarta Xayeysiiska Aqoonsiga Mobilada ee 'Infutor's Total Solution Solution Solution' ayaa ah ku dar xoog leh oo naga caawinaya inaan u adeegno baahidaan suuqa ee sii kordheysa
David Finkelstein, agaasimaha guud ee BDEX
Helitaanka Wadarta Aqoonsiga Xayeysiiska ee Mobilada xalka, goobta la martigeliyey oo laga heli karo mowjadyo badan oo diris ah, waa guul u soo hoyatay suuqleyda raadinaya xogta ugu dhameystiran iyo tan hadda jirta ee xalinta aqoonsiga. Suuqyayaashu waxay u adeegsadaan xogtan moobiilka ah ee hodanka ah inay ku ballaariyaan gaadhitaankooda iyagoo adeegsanaya aqoonsiyo dijitaal ah si ay ugu bartilmaameedsadaan macaamiisha aaladaha moobilada oo dhan, abuurista farriin isdaba joog ah oo omnichannel ah, hagaajinta sicirka dusha sare ee bartilmaameedka dhijitaalka ah iyo barnaamijyada iyo xoojinta isku xidhka qalabka iyo xallinta aqoonsiga.
In a mobilada-marka hore, cookie kadib adduunka, kuwa ugu guulaha badan ee dhijitaalka ah waxay adeegsanayaan xogta garaafka aqoonsiga iyo xallinta aqoonsiga si loo siiyo sii wadista qalabka iyo khibradda shaqsiyadeed ee macaamiisha rabaan. Xogta adag ee MAIDs waxay muhiim u tahay hagaajinta xallinta aqoonsiga iyo dhismaha aaladda khadka tooska ah ee khadka tooska ah ee bey'ada cookie-ka waxayna siisaa isku xirnaanta lagama maarmaanka u ah hagaajinta heerarka beddelashada iyo kordhinta ROI ee kharashka suuqgeynta dhijitaalka ah
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Xalka Aqoonsiga Xayeysiiska ee Mobilada ee Macaamiisha
Tags: xayeysiisBDEXcookie-ka yarInfutor Total Aqoonsiga Xayeysiiskagabadhgabdhahaaqoonsiga xayeysiiska moobaylkaids ad mobilemobilada-marka horeon-weeynWadarta Aqoonsiga Xayeysiiska ee Mobaylka
Shan Dariiqo oo Shirkadaha Martech ay u Ciyaaraan Cayaarta Dheer ee la Siiyay 28% Hoos u dhac ku yimid Kharashka Suuqgeynta